BUDDHIST TERMS' Dictionary: PERFECTION IN PATIENCE - ခန္တီပါရမီ
PERFECTION IN PATIENCE - ခန္တီပါရမီ
PERFECTION IN PATIENCE Khantῑ pᾱramῑ
ခန္တီပါရမီ - သည်းခံခွင့်လွှတ်မှုကို ဖြည့်ကျင့်ခြင်း။
အလောင်းတော် ခန္တီဝါဒီရသေ့သည် နားရွက်ဖြတ်ခြင်း၊ လက်ခြေဖြတ်ခြင်းတို့ဖြင့် ကလာဗုမင်း နှိပ်စက်သည်ကို အမျက်မထွက်ဘဲ သည်းခံခွင့်လွှတ်တော်မူခြင်းသည် ခန္တီပါရမီ ဖြစ်သည်။
Striving to fulfil perfection in patience to be patient and forbearing
The future Buddha inapast existence as the recluse Khantῑvᾱdῑ had his limbs amputated and his ears cut off by orders of King Kalᾱbu. But the recluse Khantῑvᾱdῑ harboured no ill-will against the king and forgave him. This is an example of striving to fulfil the perfection in patience.